Izimbuzi zizilwane ezivame ukulima ngenxa yokuthi ziyiziphequluli eziningi futhi zingasetshenziswa ezindaweni zendawo yokulima kanye nezihlahla ezinjengezinkomo. Ukuba iziphequluli (ukudla amaqabunga avela ezihlahleni) ngakho-ke akuphikisana nezinkomo zokudla. Ngaphezu kwalokho, imikhuba yokuphequlula yezimbuzi isiza ukulwa nokuqothulwa kwamahlathi e-Savannah nasezindaweni zokuhlakulela izindawo, kepha kungabangela nokugqithisa.
Iziningi zezimbuzi ezigcinwe emadolobheni (njengezimbuzi zendabuko) ngokuvamile azondliwe noma yikuphi okusanhlamvu kepha ukudla okuyizinyosi zokudla, ngakho-ke, isivuno sabo sebisi nsuku zonke ngokuvamile siphansi kakhulu. Ukuqinisekisa ukukhiqizwa okuhle kobisi, kuzodinga izakhi ezengeziwe futhi kuzophendula ngokucophelela ekunakekeleni okuhle nokudla okungeziwe.
Ukondla ubisi lwezimbuzi, izimbuzi zezimbuzi nezimbuzi ezikhishwe i-fiber (mohair noma cashmere) kuzodinga imikhawulo ethile ngokusekelwe kwesigaba sabo sokukhiqiza nesimo. Isilwane sokudla okunomsoco noma inkampani yokudla singasiza ekwakheni uhlelo lokudla olulinganiselayo lwezimbuzi.
Injwayezi Yokondla Izimbuzi
Izimbuzi ziyizilwane ezibucayi ezinokudla okungajwayelekile. Abadli ukondla okungcolile noma okungahoxayo futhi akuthandi ifolda emanzi, edala noma ephangiwe. Ukudla kwezimbuzi kufanele kuhlambuluke futhi kuhlanzeke futhi kufanele kuhlale kufakwa emgodini. Gcina imifino ihlanzekile ngokususa noma yikuphi okusele.
Uma usondeza u-hay, uwubeke ku-hay-racks noma ulayishe ukudla okuvela emthini noma isikhonkwane odongeni.
Imbuzi iyimifucumfucu futhi ingcono kakhulu idle ama-fodders amancane afana ne-lucerne ne-cowpeas (phezulu amaprotheni), kunamahlumela, ummbila, isililage noma utshani.
Thenga isondlo esingcono kakhulu sekhwalithi ongayithola bese uyigcina kude nelanga nemvula. Qoqa u-hay ngenkathi ekhulayo bese ulondoloza lokhu ngezikhathi zokuntuleka kokudla ngesikhathi somile. Izithombo zokutshala izitshalo nezitshalo kufanele ziqoshwe ngaphambi kokudla kanye nezinhlamvu zingacutshungulwa. Hlanganisa ukudla kahle kakhulu ukuvimbela izimbuzi ukukhipha nje izinkinobho ezihlwabusayo.
Ukuhlinzeka ngokuphakelayo okusha; Ukudla kuphela kokudla kwosuku olulodwa kufanele kuxutshwe. Ungavumeli isondlo sikhulile noma siyi-moldy. Noma yikuphi ushintsho ekudleni kwezimbuzi kufanele kwenziwe kancane kancane, okungenani ngesonto.
Izidingo Zamandla Kanye Namaprotheni Wezimbuzi
Ama-carbohydrate namafutha womabili ahlinzeka amandla. Amandla adingekayo ekukhuleni, ekuzaleni, ekukhiqizeni nasekumelaneni nezifo kanye nezifo.
Izimbuzi nazo zidinga amaprotheni. Amaprotheni yiyona eyakhiwe eyinhloko yocingo ngalinye emzimbeni wazo zonke izilwane futhi kubalulekile ekukhuleni, ekuphikeleni izifo, ekukhiqizeni kanye naselacation (ukukhiqizwa ubisi).
Esinye sezigaba zokudla ezibaluleke kakhulu kuzo zonke izimbuzi amandla - aboniswa njenge-TDN = izakhi zomzimba ezidliwayo.
Ingqikithi yokudla imbuzi izoyidla usuku ngalunye ilinganiswa ngokwemibandela ye-'Dry Matter Inake '(DMI). Isamba sendaba eyomile esidliwe sincike ngobukhulu bembuzi, umsebenzi wayo nokukhiqiza. Ubukhulu be-DMI buzofezwa kuphela uma kukhona ukudla okwanele futhi kuyathandeka okuhle.
Ukwengeza inani elanele lemifino ekudleni kwakho kwembuzi njalo kumele, kungakhathaliseki ukuthi uveza ubisi lwezimbuzi noma ubisi lwezimbuzi. Izimbuzi zobisi ikakhulukazi zidinga imifino ngaphezu kwezimbuzi zenyama, ngakho-ke qinisekisa izimbuzi zakho.
Uma udlelo lungatholakali, tshala izinhlobo ezihlukahlukene zohlaza utshani nezihlahla ezincane endaweni ethile.
Ukugcizelela ukudla okuphezulu kwamandla kukhona ummbila, ibhali, izinhlamvu zokugcoba kanye nezinhlanzi
ikhekhe lamafutha ekhekhe. (Izinhlamvu ze-brewers yizinhlayiya eziqinile ezishiywe ngemuva kokukhiqizwa ubhiya. Nakuba ibhali liyisitshalo esikhulu esetshenziselwa ukuphuza, ukolweni, ummbila, ilayisi, amabele namabele asetshenziswa futhi.)
Ukudla kwezimbuzi eziphezulu kwamaprotheni kufaka inhlanzi, ukudla kwesoya sosa, i-cottonseed oil ikhekhe ukudla kanye nezinhlamvu zamabele